बर्दियामा हतियारधारी लुटेराको समूह सक्रिय – GoodnewsKhabar
बर्दियामा हतियारधारी लुटेराको समूह सक्रिय
सुनचाँदी ब्यवसायि असुरक्षित बन्दै
गुडन्यूज खबर । २०७८ पुष २९, बिहीबार १६:४४
गुलरिया नेपालगंज राजमार्गमा पर्ने बर्दियाको शितला बजारमा बुधबार मध्यराती हतियारधारी लुटेराको एक समूहले चोरी गरेको छ ।
परिवारका सदस्यहरुलाई नियन्त्रणमा लिई बर्दिया सुन चाँदी पसलबाट नगद सहित ३ लाख ३५ हजार रुपैंया बराबरको धनमाल चोरी भएको पीडितले बताएका छन ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) ईश्वर कार्कीले चोरीको घटनाबारे जानकारी पाउन साथ अनुसन्धानमा प्रहरी लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डर नजिक भएकाले तत्काल अप्रेशन गर्न पाएनौं, पीडितको बयान अनुसार अनुसन्धानलाई जारी राखेका छौं ।’
बर्दियामा एकपछि अर्को गर्दै चोरी भईरहेको छ, के सुनचाँदी ब्यवसायिहरु असुरक्षित बन्दै गएका हुन ? बर्दिया प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने भएको हो ? वा कहाँनिर के कमजोरी भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा एसपी कार्कीले भन्नुभयो, ‘घटनाहरु घटेको छ, सबै सुनचाँदी पसलमा भएका चोरीका घटनाहरु एकै प्रकृतिका छैन्न । सबै नागरिकको घरमा प्रहरी खटाउन पनि सकिन्न, हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि सिसि क्यामेरा जडानका लागी भनिरहेका छौं । र स्वंयम नागरिकहरुले पनि सेल्फ सुरक्षा सावधानी पनि अपनाउन सके प्रहरीलाई पनि शान्ति सुरक्षा ब्यवस्था कायम राख्न सहयोग पुग्छ, राम्रो हुन्छ ।’
२०७८ पुष २९, बिहीबार १६:४४
संवाददाता, गुलरिया । लुम्बिनी प्रदेशको संञ्चार विधेयक सबैको सुझावलाई समेटेर संसद सचिवालयमा टेबुल गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा (हिमाल) ले बताउनुभएको छ । आज बर्दियाको गुलरियामा प्रेस सेन्टर नेपाल बर्दिया शाखाले आयोजना गरेको ‘माघि पर्व २०७८ को शुभकामना आदान प्रदान तथा पत्रकारसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्रि […]
२०७८ भाद्र १०, बिहीबार ०६:३७
तीनवटा प्रदेशमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना, पाँचवटा प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
२०७८ भाद्र २५, शुक्रबार ०७:३०
२०७८ असार १६, बुधबार ०८:१४